သင်၏ Linux အသိပညာကိုမျှဝေပါ Linux မှ
သင်၏ Linux အသိပညာကိုမျှဝေပါ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | FileLet ရဲ့ UseLinux
ဘလော့ဂ်ရေးခြင်း၊ သင်အားလုံးကိုပုံမှန်မွမ်းမံခြင်း၊ တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှမကောက်ဘဲထားခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ စနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေတွေကိုရေချိုးခန်းထဲမှာတောင်၊ ငါ့ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီး၌လည်းကောင်း၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ကိုတီထွင်သောအမည်မဖော်လိုသောပရိုဂရမ်မာများ၏မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုကဲ့သို့ပင်အနည်းငယ်သောအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုသုံးစွဲသူများ / စာဖတ်သူများပိုမိုလိုအပ်နေသည့်အခြေအနေနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်တကွဘောင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဒီနိဒါန်းကသနားဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတင်စကားစာပိုဒ်တွေကိုချန်ဖို့မရှာပေမယ့်အစား ရပ်ရွာသို့အလှူငွေများမပေးသေးသူများကိုအားပေးပါ။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်အဆင်ပြေသော passive သဘောထားကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဗျာဒိတ်ရူပါရုံတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအာဟာရဖြစ်စေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်အသိုင်းအဝိုင်းအားဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွင့်ရန်ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်သူအား၎င်းကိုအသက်ပေးသည်။ ထိုစီမံကိန်းများတွင်၎င်းတို့သည်အရေးကြီးသောလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမရှိသောကြောင့်လျစ်လျူရှုခြင်းခံရသည်။
အခုဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်းတခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။ အဖြေမှာမေးခွန်းဖြစ်သည်။ အဆောက်အ ဦး အရေးယူဆိုလို။ သို့သော်မည်သူ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနည်း။ အနည်းငယ်လော။ အားလုံးရဲ့? ထိုတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအသိုင်းအဝိုင်းအမျိုးအစားများအကြားခြားနားချက်ရှိသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနယ်ပယ်မှာအသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းငါတို့ပြောသောအခါ၎င်းသည်အဖွဲ့ဝင်အများစု၏အရေးကြီးသောပါဝင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ ၀ င်လိုသောအသိုင်းအဝိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်ဖြင့်၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏နောက်ကွယ်ရှိအတွေးအခေါ်နှင့်အညီအသိုင်းအဝိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
တစ်ခုမှာနည်းလမ်းများစွာနှင့်နေရာများစွာတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အကယ်စင်စစ်သင့်အများစုသည်ယင်းကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီမှာ code ထည့် ၀ င်ခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်၏အဆိုပြုချက်မှာဤဘလော့ဂ်၏တံခါးများကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည် အညွှန်း အတွင်းမှာ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသိုင်းအဝိုင်း။ ဒီနေရာမှာမင်းလုပ်ချင်တဲ့အလှူငွေဟာရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲအလျင်အမြန်ထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်။ ၎င်းတို့သည်ဘလော့ဂါများသို့မဟုတ် Linux ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ မျှဝေရန်နှင့်ရေးရန်အလွန်အေးမြသောအရာတစ်ခုရှိသည်။
စိတ်ကူးတစ်ခုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် အပတ်စဉ်ယှဉ်ပြိုင်မှု။ သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပါ အီလက်ထရောနစ်စာပို့ က နည်းပြဆရာ, သော အဖျားစသည်တို့ (in စာသားပုံစံသူတို့ကတန်ဖိုးရှိသည်ထင်) ဝေစု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံစံချခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်အမှု၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပေးခြင်းကိုဂရုပြုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » သင်၏ Linux အသိပညာကိုမျှဝေပါ
19 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဟိုဆေးအန်တိုနီယိုကော့စတာက de Moya ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာပူးပေါင်းရန်အလွန်ကြီးစွာသောပဏာမခြေလှမ်းနဲ့တူပုံရသည်။ အထက်ပါအပြင်, သင်ကမှာကြားနှင့်ဝီကီလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဟိုဆေးအန်တိုနီယိုကော့စတာက de Moya ကိုပြန်ပြောပါ
Solidrugs Pacheco ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပါတယ် growing ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်၊ ဤဘလော့ဂ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက် linux အသုံးပြုသူအတွက်အလွန်ကောင်းသောရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမရှိသေးလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်စာရင်းပြုစုခြင်းမပြုပါ။
Solidrugs Pacheco အားစာပြန်ပါ
သင်ဤ site နှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်, ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့်ရွှင်လန်းပွုပါပွီ!
မင်းကိုတကယ်ချီးကျူးချင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ကို "Linux ကိုသုံးပါ" ၏အရည်အသွေးနှင့်ကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုများဖြင့်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောအလုပ်နှင့်အပ်နှံခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဤကဲ့သို့သောဆိုဒ်များသည်အခြားနေရာများမှလူများသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာပိတ်ဆို့ခံရပြီးအသေးငယ်ဆုံးကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်ကိုပင်လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်မှာယခင်ကထက်ပိုမိုများပြားနေသည်။
ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်တွင်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားသည်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ထူးကဲသော၊ Ubuntu ဟုထင်သောကျွန်ုပ်၏မျက်နှာစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေသောအရာများသည်ဤဘလော့မှဖြစ်သည်။
“ အယူအဆ” ၏အားသာချက်မှာအသင်း ၀ င်အားလုံး၏တက်ကြွစွာပါ ၀ င်မှုတွင်တိတိကျကျဖြစ်သောကြောင့်ဤအကြံဥာဏ်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ရှေ့တွင်…
ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာဟာရဖြည့်စွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကိုအသုံးပြုရန်ကူညီသောဘလော့ဂ်များစွာသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အချို့သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောဘလော့ဂ်တွင်ဗဟိုပြုပါကပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ ထို့ကြောင့်ဤဘလော့ဂ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအသုံးပြုပြီး၊ များစွာသောလူများကမျှဝေခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ငါတစ်ခုခုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါ GIS မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးလို့ရမယ်ထင်တယ်။ တခြားဘလော့ဂ်တွေလည်းအတူတူပဲလုပ်နေကြပေမယ့်ရှင်းနေတာကတော့ဒီဘလော့ဂ်ဟာငါတို့သုံးသူတွေ၊ အားထုတ်မှုတွေအတွက်ငါတို့အတွက်တကယ်ကောင်းပါတယ်။ အမြဲတမ်းအပ်နှံခြင်း၊ တစ်ခုတည်းသောဝမ်းနည်းစရာမှာဆဲလ်ဖုန်းတွင် android နှင့်ကစားခြင်း မှလွဲ၍ အခြားဘာမျှမရှိဘဲ desktop သို့မဟုတ် notebook ပေါ်တွင် linux ကိုအသုံးပြုလိုသောလူနှင့်နီးစပ်သူလူအနည်းငယ်သာရှိရန်ဖြစ်သည်။
anuro croador အားပြန်ပြောပါ
Linux သုံးရအောင် ဟုသူကပြောသည်
Eider ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ... မကြာခဏအသိအမှတ်မပြုတဲ့၊ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လို့ ... လအနည်းငယ်အကြာမှာ Linux အကြောင်းဘလော့ဂ်တွေကွယ်ပျောက်သွားတယ် ...
Let's Use Linux ကိုတုံ့ပြန်ပါ
ယောလ Almeida Garcia က ဟုသူကပြောသည်
ငါဖြည့်စွက်သည်မှာ၎င်းသည် "distros war" သို့မဟုတ် "desktop environments" မဟုတ်ဘဲအဆိုပြုသည့်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသူများသည်တောင်မှအပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာများကိုမြင်နိုင်သည့်နယ်ပယ်တစ်ခုသို့မဟုတ် "ဘူဖေး" ဖြစ်လိမ့်မည်။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရည်ရွယ်ချက်စိတ်ကူး။
Joel Almeida Garcíaအားပြန်ပြောပါ
လူးဝစ်Adrián Olvera Facio ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်ုပ်၏အလှူငွေများကိုလွှတ်လိုက်ပြီးများစွာသောသူတို့ကိုအစေခံပါလိမ့်မည်။ နုတ်ဆက်ပါတယ်
LuísAdrián Olvera Facio အားပြန်ပြောပါ
၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် linux ဖြစ်ရန်လိုသလားသို့မဟုတ် distro တစ်ခုတည်းပေါ်တွင်သာအာရုံစိုက်နိုင်ပါသလား (သင်ပင်အသုံးမပြုသည့်)?
Eduardo Campos ကိုပြန်ပြောပါ
အိန်ဂျယ်ဂျေ Mota ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Backbin application ကို Ubuntu 12.04 lts တွင်သုံးသည်။ သို့သော်ဤ application ကို Ubuntu 12.10 တွင် configure လုပ်သောအခါ .gvfs ဖိုင်တွဲကိုရှာ။ မရပါ။ ကြိုတင်မဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Angel J. Mota အားပြန်ပြောပါ
သူ Alicia ဟုသူကပြောသည်
Eider ဂျေ Chaves C. ဟုသူကပြောသည်
ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏အသိပညာမျှဝေအတွက်ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်ခွင့်ပြုချင်! …ခက်ခဲတဲ့အလုပ် !!!
Eider J. Chaves C. ထံပြန်သွားပါ။
Jorge Ruiz ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ဖိတ်ကြားချက်မှာ - "Linux ကိုသုံးကြစို့"
Jorge Ruiz သို့ပြန်သွားပါ
ငါ local group တွင်လုပ်နေသော libreoffice အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်အခြေခံကျသောလမ်းညွှန်များကိုကျွန်ုပ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
Carlos Rocha ကိုပြန်ပြောပါ
ငါဖြည့်စွက်လိုသည်မှာလူအများတို့သည်ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့၏ဗဟုသုတကိုဝေမျှနိုင်ရန်အတွက်သူတို့၏ဘလော့ဂ်ကိုစတင်လိုကြသည်။ သို့သော်အဆုံး၌ဘလော့ဂ်သည် "ဘာမျှမ" ဘဲအဆုံးသတ်သွားသည်၊ မည်သည့်ပို့စ်တင်မှမရှိပဲခေတ်နောက်ကျသွားသည်၊ သို့မဟုတ်အလွန်ကောင်းသည့်ပို့စ်အချို့နှင့်အဆုံးသတ်သွားသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောပျံ့နှံ့မှုမရှိခဲ့ပါ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းကအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးမရှိခဲ့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကလူအများစုကိုမရောက်နိုင်ဘူး။ ဘလော့ဂ်တစ်ခု၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည်လူအများစုထံရောက်ရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ရန်အချိန်မရှိလျှင်ဖြစ်သည်။ လူအများစီးဆင်းမှုများသောနေရာများရှိလူသိများသောဘလော့ဂ်များကိုကူညီခြင်းနှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ကျေးဇူးတင်မှုအားလုံးကိုပေးအပ်ရန်နှင့်အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသောစာရေးသူ၏အမည်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေပေးခြင်းဖြင့်တာဝန်ယူလိမ့်မည်။ ငါ hehe စိတ်ကူး မင်္ဂလာပါ
Rodny Silgado Cabarcas ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က Ubuntu မှာရှိပြီးသားအရာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုလျှင် ၁၂.၁၀ ဗားရှင်းမှာပြုပြင်မွမ်းမံမှုအနည်းငယ်သာရှိပြီး၊ ငါထုတ်ဝေပြီးတဲ့နောက်ဘာလဲ။ ငါမပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ဘူး, ငါအချိန်ရှိသည်မဟုတ်။ ဒီအဆိုပြုချက်ကိုပြီးပြည့်စုံသောပါပြီလိမ့်မယ်။
Rodny Silgado Cabarcas အားပြန်လည်ပြောပြပါ
Eddy santana ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းမွန်သောပဏာမခြေလှမ်း၊ အားပေးသူများနှင့်၎င်းတို့၏ထည့်ဝင်မှုများပေးပို့ရန်အသုံးပြုသူများစွာရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်၊ ထို့ကြောင့်ပိုမိုကွဲပြားသောဘလော့ဂ်ကိုရရှိလိမ့်မည်။
Eddy Santana အားပြန်ပြောပါ
ဒီပုံဟာအရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့လည်းထင်တယ်၊ တချို့ကအစပြုသူတွေကစာသားသက်သက်သာသာကြည့်တာကိုငြီးငွေ့တယ်၊ ပြောင်းလဲမှုအတွက်ပုံသေးသေးလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ပို့စ်တင်ခြင်းသည်အစတွင်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ သို့သော်အချိန်နှင့်သုတေသနများဖြင့်သင်၏အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်အောင်သင်မည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာပါ။
Ubuntu ပါသော ASUS F201E netbook အသစ်
ကျနော့်အမြင်အရ - DesdeLinux ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတကယ်တမ်းဘာတွေကူညီပေးသလဲ။